Litecoin Withdrawals Mere Easy - Oke Magazine - pisklak.net
Litecoin Withdrawals Mere Easy – Oke Magazine
Onwa Litecoin anyi na emechi na njedebe. Anyị ahụla ụfọdụ mmeri ndị mara mma na iji LTC mee ihe n’ụzọ amamihe dị na nkwalite June anyị. Agbanyeghị, anyị ka nwere ọtụtụ ụbọchị ịga, na ọtụtụ ndị ọzọ Litecoin nkwụnye ego na withdrawals hazie. Dịka anyị ji bido ọnwa na Litecoin Depositing Guide anyị kwesịrị ịkwụsị ya site na ịkọwa Litecoin Withdrawals. Kickback, zuru ike, ma nọgide na-agụ obere ndu a.
Enwere m ike ịdọrọ mmeri m na Litecoin?
Nke a bụ otu isi nchegbu ọtụtụ ndị ọrụ nwere. Na nkenke, azịza ya bụ – ee, ọ bụrụ na ịdebeburu ego na Litecoin.
N’ezie, itinye ego na nkwụghachi na Litecoin nwere uru ha. Anyị akọwaworị uru LTC na-etinye. Agbanyeghị, ọ nwere ike ịba uru iji weghachite uru kachasị dị nkenke n’ihi na iwepụ Litecoin nwere otu atụmatụ ahụ.
Litecoin Withdrawals Ngwa ngwa karịa mgbe ọ bụla
May nwere ike icheta na itinye na LTC na-enyere gị aka ịnweta egwuregwu ọsọ ọsọ n’ihi na nhazi ịkwụ ụgwọ bụ ugboro 4 karịa ka ọ dị na mbụ. Otu ụzọ iwepụ Litecoin were oge 4 oge karịa oge mbụ.
Otu egwuregwu dị na crypto casino Oke dịkarịsịrị ama dị ka “ndị eze na-ewepụ ozigbo”. Ugbu a, site na iwepụ Litecoin anyị na-ebuli ihe mgbochi ma mebie njedebe. Gị, dị ka onye ọkpụkpọ nke a pụtara na ị ga-enwe ike itinye aka gị na ego gị ngwa ngwa karịa mgbe ọ bụla ọzọ.
Enwere m ike ịdọrọ na ego ọzọ?
E wezụga ịkwalite Litecoin na June a, cha cha cha cha cha cha bụ ọkacha mmasị gị Bitcoin cha cha. Dị ka ọ dị na mbụ, Bitcoin bụ usoro nkwụsị na-agbanyeghị ego ị tinyere. Ọ pụtara na ị nwere ike itinye na Litecoin ma wepụ ya na Bitcoin.
N’ụzọ ahụ, ị ​​ka na-enweta ego gị ngwa ngwa, dịka ọ dị na mbụ, yana maa ọsọsọ karịa n’ọtụtụ casinos ndị ọzọ dị n’ịntanetị. Agbanyeghị, anyị na – atụ aro ka ị nwaa ihe ọhụụ n’ọnwa a ma were uru Litecoin anyị na – enye mee ihe.
Litecoin Withdrawals na Ole na ole Nzọụkwụ
Litecoin ndọrọ ego na-na-emebu ole na ole nzọụkwụ na dechara obere. Iji nwee ike ịdọrọ na LTC, ị kwesịrị ịdebeworị n’otu ego ego crypto. Ihe ndi ozo di otu dika na mbu:
Isi aka nri na onye okwu ugwo n’okpuru taabụ – EGO KWESSTR Select KWES SelectR wish Họrọ ego ịchọrọ ịkwụ ma họrọ ego Litecoin na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịkwụ ụgwọ. Detuo adreesị nke obere akpa gị na ihuenyo ọzọ, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa biputere ntuziaka ndị ọzọ maka ndị otu na-akwado anyị. Rịọ ụgwọ site na ịpị bọtịnụ “Arịrịọ Pakwụ ”gwọ” bọtịnụ.
Casino Oke otu chọrọ gị ọtụtụ mmeri obi ụtọ na ọsọ ọsọ ịkwụ ụgwọ! Ka anyị mara otú o si gaa.